कुन मास्क कति समयसम्म लगाउन सकिन्छ ?
कोभिड-१९ को संक्रमणबाट जोगिन विज्ञहरूले मास्क लगाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छन्। पछिल्लो समय सबैका लागि मास्क अत्यावश्यक भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक-पटक सबैलाई मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सचेत गराउँदै आइरहेको छ।
सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्दा थुकका छिटाहरूबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम कम हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार घरबाहिर भिडभाडमा जाँदा आफू संक्रमित हुन र अन्य व्यक्तिलाई संक्रमणको जोखिमबाट बचाउन मास्कले केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याउने काम गर्छ।
मास्क लगाउनु भनेको आफू जोगिन मात्र होइन, अरूलाई जोगाउन पनि हो। तर मास्कको सही प्रयोग र सही छनोट सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अहिले बजारमा थरिथरीका मास्कहरू पाइन्छन्। मास्क देखावटीका बनाइएका छन् कि त्यसको गुणस्तर, प्रभावकारिता कति छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न गरेका छन्। यद्यपि संक्रमणबाट जोगाउन कस्तो मास्क कति सुरक्षित छ भन्ने जानकारी नभए पनि मास्कको प्रयोग भने गरिराखेका छौँ। जुन राम्रो कुरा हो।
तर, अब मास्कको गुणस्तरबारे जानकारी राख्नु पनि अति आवश्यक छ। साथै कस्तो ठाउँमा कुन मास्क लगाउने भन्ने जानु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञका अनुसार मास्कको प्रयोग गर्दा सबैभन्दा पहिला आफू कस्ता ठाउँमा जाँदै छु भन्ने कुरालाई ध्यानमा दिनु पर्छ। जोखिमयुक्त ठाउँमा जाने व्यक्ति जस्तैः स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीले एन-९५, एन-९९ मास्क प्रयोग गर्नु पर्छ।
भिडभाडमा जाने, दीर्घ रोगी, लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूले यस्तो मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ। तर अन्य व्यक्तिले भने सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्नु पर्दछ। मास्क प्रयोग गर्दा सकेसम्म फिल्टर नभएको मास्क प्रयोग गर्न विज्ञको सुझाव छ। फिल्टर नभएको एन-९५, एन-९९, केएन-९५ मास्क प्रयोग गर्नु पर्छ।
फिल्टर भएको मास्क सुरक्षित छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरे अनुसार फिल्टर भएको मास्कले भाइरसलाई फिल्टर गर्न नसक्ने भएका कारण यस्तो मास्क प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ। त्यसैले सकेसम्म फिल्टर नभएको मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। मास्क धेरै प्रकारका भएता पनि प्राय जस्तो नेपाली बजारमा पाइने चार किसिमका मास्क बढी प्रयोगमा आइरहेको छ।
१) एन ९५ मास्कः नेपाली बजारमा पाउने मास्कको दाँजोमा यो मास्क प्रभावकारी र गुणस्तर भएको मास्क हो। यसले भाइरसलाई ९५ प्रतिशतसम्म रोक्दछ भने ब्याक्टेरिया, फोहर, धुलोलाई झन्डै शतप्रतिशत रोक्ने गर्दछ। त्यसैले यो मास्क राम्रो छ।
२) सर्किजल मास्कः यो मास्कको प्रभावकारिताको कुरा गर्दा भाइरस रोक्ने सन्दर्भमा एन९५ ले जस्तै यसले पनि ९५ प्रतिशत नै रोक्ने गर्दछ भने अन्य व्याक्टेरिया, फोहोरलाई एन ९५ भन्दा कम रोक्ने गर्दछ। यो मास्क एन९५ भन्दा सस्तो र भाइरसको दाँजोमा एन९५ ले जस्तै रोक्ने भएकाले राम्रो छ। र यो मास्क प्रयोगको लागि उचित छ।
३) कपडाको मास्कः यसले हामीलाई माथिका २ मास्कको दाँजोमा कम सुरक्षा प्रदान गर्छ। यो मास्कलाई माथिका २ प्रकारका मास्क नभेटिएको खण्डमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
४) स्पोन्ज मास्कः यो मास्क देख्दा धेरै प्रभावकारी भएको जस्तो राम्रो देखिएता पनि माथिका अरू भन्दा धेरै कम प्रभावकारी छ। अहिलेको समयमा हेर्दा राम्रो र सुन्दर देखिने मास्कभन्दा पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी मास्क नै प्रयोग गर्नुपर्छ।
मास्क प्रयोग कति समयसम्म गर्ने ?
पछिल्लो समय बजारमा पहिले केएन-९५ मास्क २४ घण्टासम्म मात्र प्रयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। मास्कको बनावट अनुसार मास्कको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। सर्किजल मास्क भने ५ देखि ६ घण्टासम्म प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ।
एक पटक प्रयोग गरेको सर्किजल मास्क अर्को पटक लगाउन मिल्दैन। लगाइसकेको मास्कलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। नेपालमा एन-९५, केएन-९५, सर्किजल मात्र नभएर कपडाको मास्क पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कपडाको मास्क प्रयोग गर्नु भनेको छैन। कपडाको मास्कले थुकका छिट्टा रोक्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
तर नेपालमा भने कपडाकै मास्क भए पनि प्रयोग गर्न भनिएको छ। नेपालमा सङ्क्रमण देखिँदै गर्दा जब बजारमा मास्कको अभाव भएको थियो। तब विभिन्न अस्पतालहरूले कपडाको मास्क समेत बनाएका थिए। तर अहिले बजारमा प्रशस्तै मात्रामा सर्किजल मास्क पाउन थालिएको छ। जसले गर्दा सकेसम्म सर्किजल मास्क नै प्रयोग गर्न विज्ञहरूले सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
मास्क कसरी लगाउने र फुकाल्ने ?
मास्कको प्रयोग गर्नु भन्दा अगाडिदेखि मास्क निकाल्दासम्म सही तरिका अपनाउनु पर्ने डा. बम बताउँछन्। मास्कको प्रयोग गर्दा सबैभन्दा पहिला राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। धोएको हात सुकिसकेपछि प्याकेटबाट मास्क निकालेर मास्कको भित्रपट्टि नछोएरै दुई वटा डोरीको सहायताले लगाउनुपर्छ। सर्किजल मास्क हो भने मास्कको दोबारिएको तहलाई तलतिर पारी दुई हातले डोरी समाएर कानमा अड्काउनु पर्छ।
मास्क लगाइसकेपछि नाकमा टम्म हुने गरी मिलाउनु पर्छ। मास्कले नाक र मुख छोप्नुका साथै चिउँडो पछि छोपिने गरी लगाउनु पर्छ। लगाइएका बेला मास्कलाई चिउँडो मुनि झुन्ड्याउने, धेरै पटक फुकाल्ने गर्नुहुँदैन। पसिना आएको, जथाभावी छोएको, मोबाइल चलाएको हातले घरीघरी हातले मास्क छुनुहुँदैन। यसो गर्दा संक्रमणको जोखिम अझ धेरै हुन सक्छ।